‘दाह्रीकी जय’ - Prarambha Khabar
रमेश शुभेच्छु (लेखक तथा युवा समलोचक)
तिमीले साह्रै दिक्क लायौ यार । किन दाह्री पालेको ? दाह्रीले कस्तो सुहाएको ? दाह्रीले स्वाएको छ है । के तिमीलाई अरु केही भन्नु छैन ? किन दाह्रीको मात्र कुरा गर्छौ ? जुँगाको कुरा गरे पनि त हुने, कपालको कुरा गरे पनि हुने । ड्रेसअपको कुरा गरे नि हुन्छ नि । के मैले यी दाह्री रमाइलो लागेर पालेको ठानेका छौ ?
तिमी ठान्दा हौ, अरु पाल्न भन्दा दाह्री पाल्न सजिलो । ठान्दा हौ दाह्री पाल्नलाई विरुवा पाल्न जस्तो मल पानी नचाहिने । भेडा बाख्रा पाल्न जस्तो घाँस, पानी अन्न नचाहिने ठान्दा हौ । केही नचाहिने तर हलक्क हुर्कने वस्तु मान्दा हौ । नभए किन यसरी सोधीखोजी गथ्र्यौ ? तर दाह्री त्यसै पालिँदैन । यिनका लागि चाहिने मल पानीको कथा अर्कै छ । हेर मर्दले नामर्द कुरा गर्न मिल्दैन । मेरा घरको खर्चबर्चको कुरा गरिसाध्य छैन। श्रीमतीजीको हप्ता हप्ताको पार्लर खर्च, मेकअपको सामग्री खर्च, डुलघुम खर्च, अतिथि सत्कार खर्च त्त्यादि । यो सब जुटाउन निकै गाह्रो छ । तिमी पो विहा नगरी डुल्छौ र ठिकै छौ । मेरा जस्ता भुड्ग्रामा परेका दिन सब थाहा पाउँछौ । शुभेच्छुको निबन्ध पढेका थिएनौ ? उनीको पार्लर खर्चले मेरो दारी काट्ने खर्च कटौटी भयो र दाह्री ग्याङको सदस्य भएँ भन्ने विषय समेटेका थिए त्यस निबन्धमा । ठिक मेरो हालत त्यस्तै हो ।
तिमी मलाई टेगोर जस्तो देखियो भन्छौ । मलाई लाग्दैछ, जिस्क्याउँदै छौ । माक्र्स जस्तो देखियो भन्छौ । त्यतिबेला पनि लाग्छ तिमी उल्ल्याउँदैछौ । म कवि भएकाले लेखनाथका दाह्री जस्ता भन्छौ । त्यस बेला म झन् सर्मिन्दा बन्छु । हेर टेगोर, माक्र्स र लेखनाथका दाह्रीमा गौरव थियो । उनका दाह्रीमा जे थियो नि मेरा दाह्रीमा त्यस्तो केही छैन । यी दारीमा बौद्धिकता खोज्ने तिमी मूर्ख हौ । दार्शनिकता खोज्ने तिमी बेकुफ हौ । यिनमा सिर्जनशीलता खोज्नु बेकार छ । गम्भीरता खोज्नु झन् बेकार छ । सम्झ दाह्री छ केही पनि छैन । सून्य छ । तिमी चिन्तै नगर । तिम्रो नगरमा कोही विचारक जन्मँदैन । यी न माक्र्स प्रभावित दाह्री हुन् न रवीन्द्रनाथ ठाकुर प्रभावित दाह्री । न एङ्गेल्स प्रभावित दाह्री न लेलिन प्रभावित दाह्री । तिमीले अर्थअभावले अर्थशास्त्री रोबर्ट जे अउम्यान हुन लागेको पनि भन्न भ्यायौ हैन । त्यो अन्दाज केही पनि होइन । रवीन्द्रले पाएको नोबेल पुरस्कार संस्थापक नोबेल प्रभावित पनि होइन । हाम्रै मनमोहन प्रभावित त होइन अरुको के कुरा । यी दाह्री बरु अर्थअभाव प्रभावित दाह्री हुन् । यी हुन् भने विरक्ति र आपत्तिका चिन्ह मात्र हुन् । यीनमा शन्त र जोगी चेत पनि छैन । भोगी हुन नपाएका पीडाका चिन्ह हुन् । देख्नेले जे जे देखे पनि मेरो भन्नु केही रहेन । यी कपडामा पनि केही स्टायल छैन । छ त उही विरक्ती । उही पीडा । उही अभाव । उही गरिबी । उही मालिकको सेवाले दिएको पीडा ।
बरु सत्य भनूँ, तिमीले चासो लिइहाल्यौ म भन्छु । दाह्री पालेपछि बिलेड किन्ने खर्च बचत भयो । दाह्री काट्ने बेलामा दल्ने साबुनको बचत भयो । यी दाह्रीले सेफ स्याम्पो त कहिल्यै देखेका पनि छैनन् । दाह्री काटेपछि दल्नु पर्ने क्रिमको बचत भयो । टाइ बाँध्ने झन्झट भएन । कलर भएको लुगा नलाए पनि भयो । थोत्रो कोटले पनि सुहायो । दाह्री नै नकाटेपछि कपाल काट्ने खर्च पनि बच्यो । कुनै केटीले आँखा लाउने सम्भावना पनि टर्यो । यी दाह्रीले माक्र्सको चेतना ममा भर्न नसके पनि नि वर्गीय विभेदको एउटा पक्षचाहिँ देखाएका छन् । धनबहादुर साहूले सोखले पालेका दाह्रीसँग मेरा दाह्रीको साइनो गाँसिएको छ । मैले कमाएकोले ऊ तेल हालेर र छाँटकाँट गरेर दाह्री पाल्छ । म उसलाई पोस्न छाँटकाँट नगरी र तेल नदली दाह्री पाल्छु ।
मलाई दाह्री पालेर दाह्री ग्याङको सदस्य बन्नु पनि छैन । आजदेखि मेरा दाह्री हेरेर मलाई नजिस्क्याउनू । म दाह्री काट्ने हैसियत बनाएका दिन तिमीलाई भेटूँला । मलाई यो दुखको खाडलबाट कसरी उम्कने भन्ने व्यासशैलीले सोच्ने समय दिनूँ । मलाई बिथोल्दै नआउनू । म धनबहादुर साहू र मेरा दाह्रीको फरक खोजिरहेको छु । त्यसवीचमा तिमी वीरबहादुर नपल्टनू । दाह्रीकी जय ।
व्यस्त सडक चाबहिलमा घर भत्काउँदै गर्दा २ जनाको मृत्यु
नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा पाँच एजेण्डा प्रस्तुत
अपडेटः सिन्धुपाल्चोक दुर्घटनामा मृतकको संख्या १४ पुग्यो
सिन्धुपाल्चोक बस दुर्घटनाः मृत्यु हुनेको संख्या १३ पुग्यो
धनकुटामा अटो दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु
कांग्रेस बैठक सुरु, पौडेल समूहको बहिष्कार
बजार बढाउँदै बागलुङको किबी